Qaybinta Macluumaadka Bulshada ee COVID-19 - Telling the Real Story
U gudub tusmuda ugu wayn
Gabeey & Riwayeed
Heeso & Ciyaar
Beejka Koobad /
Qaybinta Macluumaadka Bulshada ee COVID-19
Iyada oo lagu saleynayo isku xirnaanta Telling the Real Story' ee isku faca, dadka caanka ah ee deegaanka iyo xubnaha saamaynta ku leh bulshada ayaa wadaagaya farriimo muhiim ah oo ku saabsan COVID-19 iyo faafinta macluumaadka khaldan.
Marka lagu daro tilmaamaha ay bixiso dowladda iyo Hayadda Caafimaadka Aduunka (WHO), waxaa muhiim ah in macluumaadka dhaqan ahaan la waafajiyo iyo waxyaabaha gaarka u ah.
Foosiya Axmed, waa abwaan ka timid Soomaaliya isla markaana taageere u ah Xaqiiqada Tahriibka. Waxay u isticmaashaa gabayada si ay kor ugu qaaddo wacyiga ku saabsan arrimaha bulshada ee kala duwan ee ka dhex jira bulshada dhexdeeda. Waxay qortay gabay kor loogu qaadayo wacyiga ku saabsan COVID-19.
Lolo Cynthia, wa taageeraha Xaqiiqada Tahribka ee Nigeria, waxay ka hadlaysaa macluumaad khaldan oo ku saabsan COVID-19. Lolo Cynthia waaxey ka shageysa caafimaadka dadweynaha iyo aasaasaha LoloTalks, waa shirkad ganacsi oo leh ujeedo kor loogu qaadayo wacyiga ku saabsan arrimaha bulshada iyo caafimaadka casriga ah ee Afrika.
Zerai Abraham Kiros, oo ah taageere Xaqiiqada Tahribka Qurbajoogta fadhigiisu yahay Jarmalka, wuxuu qurbo-joogta ku boorinayaa inay raacaan tilmaamaha muhiimka ah si ay naftooda uga ilaashadaan COVID-19. Zerai waa aasaasaha Ubuntu Haus, waa shirkad ganacsi oo khibrad iyo isdhaafsi xagga dhaqanka ah oo isu keenaya qaxootiga iyo muhaajiriinta Frankfurt.
Ku soo biir hadalkan
Firi waxa ugu dambeeyay oo faafi hadalkaan.
Soo bandhig qisada
Soo Bandhigida Xaqiiqada Tahribka
Hay’adda Qaxootiga UN